Pkg2appimage: Ahoana ny fananganana fisie AppImage antsika manokana? | Avy amin'ny Linux
Matetika izy io dia matetika, ho an'ny mpampiasa maro an'ny Rafitra miasa malalaka sy malalaka, Manokana ao GNU / Linux, amin'ny karazany maro karazana amin'ny endrika Fizarana (Distros), te-hametraka rindranasa ivelany manokana, ary tsy afaka manao azy, satria tsy mifanaraka amin'ny anay izany GNU / Linux Distro na miaraka amin'ny nomerao kinova.
Vao haingana izay no nitranga tamiko, rehefa te hanampy mpiara-miasa iray hametraka ilay rindranasa aho Packet Tracer 7.xx. momba ny Debian Distro 10, mampiasa ny Distro MX Linux 19.1. Ary aorian'ny fikarohana sy fitsapana, mametraka fonosana ivelany avy amin'ny hafa Distros (Ubuntu / Debian) ary manao «Lany andro» (fampidinana) fonosana sy alàlan'ny fanodinana tranomboky mampiasa ny miovaova $ LD_LIBRARY_PATH ary mamorona rohy an'ohatra, tsy nisy nilana azy ny zava-drehetra, mandra-pahatongako nampiasa ilay fitaovana Pkg2appimage.
Tsara, voalohany indrindra, ny manasongadina fa ny endrika fisie na ny haitao AppImage an'ny izay fantatra amin'ny hoe "Fampiharana manerantany ho an'ny GNU / Linux". Anisan'ireo endrika tafiditra amin'ity anarana ity, ankoatran'ny AppImage, mifankahita izy ireo Flatpak y anatn'ny. Na izany aza, ny sasany dia matetika mampiditra ny haitao fonosana fantatra amin'ny hoe OrbitalApps.
1 Inona no atao hoe AppImage?
2 Pkg2appimage: Fitaovana hamoronana fampiharana AppImage
2.1 Mampiasa Pkg2appimage
2.1.1 A.- Dingana 1
2.1.2 B.- Dingana 2
2.1.3 C.- Dingana 3
2.1.4 D.- Dingana 4
2.1.5 E.- Dingana 5
Inona no atao hoe AppImage?
Araka izany, AppImage dia endrika iray hizarana rindrambaiko azo entina amin'ny GNU / Linux tsy mila alalana superuser hametraka ny rindranasa. Amin'ny fomba toy izany, hamela sy hanamorana ny fizarana lozisialy binary, tsy miankina amin'ny GNU / Distros Linux. Izay tena ilaina, na ho an'ny developer na ny mpampiasa.
"Sintomy ny rindranasa iray, ataovy azo tanterahina ary alefa. Tsy ilaina ny mametraka azy. Ny tranombokim-boky sy ny safidin'ny rafitra dia tsy novaina. Izy io koa dia afaka mihazakazaka anaty boaty fasika toa an'i Firejail. Tsinjarao ny rindranasa birao Linux misy anao ao amin'ny endrika AppImage ary mahazoa mpampiasa mihazakazaka fizarana Linux mahazatra rehetra. Kitapo indray mandeha ary mihazakazaha hatraiza hatraiza. Tonga amin'ny mpampiasa amin'ny fizarana birao lehibe rehetra". https://appimage.org/
Pkg2appimage: Fitaovana hamoronana fampiharana AppImage
Araka ny voalazan'ny Developers of the Teknolojia AppImage amin'ny tranokala ofisialiny, mampiasa ny fitaovana amin'ny fomba ofisialy izy AppImageKit hanangana rindranasa manomboka amin'ny rangotra eo ambanin'ny endrika .AppImage. Mandritra izany fotoana izany, hananganana (hampiova fo) ny fampiharana AppImage avy amin'ny hafa efa noforonina tamin'ny endrika hafa, ampiasao ilay fitaovana Pkg2appimage.
Amin'ny tranga manokana, satria te hanangana a .AppImage amin'ny fampiharana Packet Tracer 7.xx, Nanohy nampiasa ny fomba voalaza ao amin'ny Repository an'i Konradmb's GitHub ao amin'ny Pkg2appimage sy Packet Tracer.
Ary araka ny filazan'ny mpanoratra, niroso tamin'ny fampiharana ireto dingana manaraka ireto aho niaraka tamin'ny baikon'ny baiko tsirairay avy:
Repository rakitra cly .yml ho an'ny Packet Tracer
Sintomy ny fitaovana Pkg2appimage ary ataovy azo tanterahina izany
Fanavaozana ny atin'ny .yml fisie miaraka amin'ny lalana fisintomana rakitra vaovao Packet Tracersatria ny lalan'ny fampidinana ankehitriny dia tsy misy rakitra. Ho an'ity tanjona ity, ny nano console editor dia azo ampiasaina toy izao:
Avy eo dia tsy maintsy hevitra (tsy miasa amin'ny #) ny tsipika efa tonta ary ampidiro ilay marina, tsipika iray ambony kokoa toy izao:
Manamboara fonosana .AppImage do Packet Tracer voalaza ao amin'ny .yml fisie
E.- Dingana 5
Ampandehano ny fonosana .AppImage do Packet Tracer namboarina. Toy izany koa, raha toa ka novonoina tsara ny zava-drehetra, dia tokony ho teo amin'ny làlana:
Ary rehefa novonoina dia ho azonao atao ny maka sary an-tsaina ny anao fampiharana AppImage vaovao tsy misy sarotra, toy ny aseho etsy ambany:
Ekipa MX Linux 19.1 (Miorina amin'ny Debian 10 - Buster)
Ekipa GNU / Linux Debian 10 (Buster)
Aorian'ity fampianarana ity sy ireo hetsika fitsapana sy hadisoana sasany dia manantena aho fa maro no afaka manangana ny fampiharana azy manokana .AppImage mampiasa Pkg2appimage.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Pkg2appimage», fitaovana natao hamoronana fametrahana rakitra ny fampiharana eo ambanin'ny endrika AppImage mampiasa fisie binary (tar.gz, .deb na .ppa) misy ary a famaritana rakitra .yml hahatratra ny fiovam-po; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Pkg2appimage: Ahoana ny fananganana fisie AppImage antsika manokana?
azubieta dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara! Faly aho mahita fa ny vondrom-piarahamonina Linux miteny espaniola dia liana amin'ny endrika AppImage. Te-handray anjara kely aho. Ny fitaovana pkg2appimage dia efa nisy hatry ny ela ary misy lesoka. Ny tena manamarika indrindra dia ny fonosana vokatr'izany dia tsy azo ampiasaina amin'ny fizarana manana glibc ambany noho ny rafitra nampiasaina hamoronana azy. Izany no antony namoronana fitaovana hafa mahay kokoa.
appimage-builder (https://appimage-builder.readthedocs.io) toy ny pkg2appimage dia mampiasa rakitra yml ho an'ny fikirakirana. Ao amin'ny antontan-taratasy dia afaka mahita fampianarana momba ny fampiasana azy ianao. Ary mazava ho azy fa afaka manontany foana ianao, azoko atao tsara ny manazava ny fanontaniana rehetra.
Alexis Lopez Zubieta sary placeholder
Mpandray anjara amin'ny tetikasa AppImage
Mamaly an'i azubieta
Miarahaba Alexis! Misaotra betsaka noho ny hevitra tsara nataonao momba ilay lahatsoratra. Manantena izahay fa hanoratra lahatsoratra tsy ho ela momba ny fitaovana atolotray ho fomba maoderina kokoa amin'ny pkg2appimage. Ho an'ny ambiny, Fahombiazana, fahasalamana ary fitahiana maro ho anao, sy ny olon-drehetra avy amin'ny tetikasa AppImage.
Viejuber YT dia hoy izy:
Ry namako, lazaiko aminao fa nanana traikefa nahafinaritra aho tamin'ny endrika .appimage, lazaiko anao, andro vitsivitsy lasa izay dia nametraka balena etcher (ao amin'ny KDE Neon) aho fa indrisy ho ahy izao dia tsy misy afa-tsy amin'ity endrika ity ao amin'ny kinova Linux. Nametraka azy aho, nampiasa azy ary namafa azy, teo no nanomboka ny olana, namorona fampirimana tao an-trano antsoina hoe Applications aho na dia hofafanao aza dia averina aorina isaky ny miverina reboot. Mihoatra ny iray andro ny fitadiavana ireo rakitra miafina noforonina tsy nahazo alalana nomenao rehefa mihazakazaka iray ianao. manintona. Ho ahy ity endrika ity dia toy ny viriosy hafa noho ny karazana programa hafa. Tsy mihomehy indray aho mametraka zavatra hafa amin'ity endrika ity.
Valiny tamin'i Viejuber YT
Miarahaba anao Viejuber YT! Mahamenatra. Izaho dia nametraka / nanala an'i Balena tamin'ny AppImage tsy nisy olana, ary tsy dia nino aho fa ny AppImage dia hetsika ratsy na fandraisana andraikitra ratsy. Tokony hiezaka bebe kokoa ianao hahita ny fandehany ...
Javi42 dia hoy izy:
Arahabaina amin'ity lahatsoratra ity. Adala koa aho nanandrana ny PacketTracer hihazakazaka amin'ny LMDE4 (Debian 10)
Manaraka ny torolàlana dia nahomby tamin'ny PacketTracer 7.2.1 aho saingy nianjera hatrany raha andramako azy ho an'ny 7.3.0 miaraka amin'ireo olana miankina amin'ny libjpeg.so.8 sy ny maro hafa.
Mamaly an'i Javi42
Miarahaba anao Javi42! Misaotra anao tamin'ny hevitrao, faly aho fa nahasoa anao ilay lahatsoratra.
Mbola miandry ny hampiasana azy miaraka amin'ny Open miaraka amin'ny: Nanandrana namorona ilay .desktop mifanaraka aminy aho saingy tsy tratrany tsara ny adihevitra% f,% F na% U mba hanokafany ilay rakitra nolovana ho masontsivana. nahatratra azy?